ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် ဘီအမ်ဒဗလျူကားများ | ဘီအမ်ဒဗလျူကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
BMW BMW 318i BMW 325i BMW M6 BMW Other BMW X5 BMW X6
Sport ကား (1)
Grey BMW M6 (V10) 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....
Pearl white BMW 523 I 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push St...
Pearl white BMW X4 2016 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်...
Black BMW 325i3Series 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger.ြ...
Lks 950 ညှိနှိုင်း
Lks 980 ညှိနှိုင်း
Black BMW 318i 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
Lks 600 ညှိနှိုင်း
Lks 780 ညှိနှိုင်း
Grey BMW X5 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Push Start,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မ...
Black BMW X6 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Push Start,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်...
ပြည်တွင်း အသုံးပြုကြတဲ့ ဥရောပကားတွေထဲမှာ ဘီအမ်ဒဗလျူကားတွေဟာလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ အသုံးများကြတာကတော့ တစ်ပတ်ရစ်က ဖြစ်ပြီး အသစ် ဘရန်တွေကိုလည်း သီးသန့် ၀ယ်ယူကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဘီအမ်ဒဗလျူကားတွေက ဈေးနှုန်းမြင့်မားတဲ့ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးကလည်း မြင့်မားတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းမှာ မော်ဒယ်ကောင်း တစ်ပတ်ရစ်တွေကို အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း ၃၀၀ကျော် ၄၀၀ ကျော်လောက်ရှိတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၀၀၆ မော်ဒယ်လောက်ကို ကျပ်သိန်း ၇၀၀ ၊ ၈၀၀ နီးပါးရှိတဲ့ တန်ဖိုးမြင့်ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးအစားစုံလင်စွာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး မော်ဒယ်ဟောင်းကားတွေကိုလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ= ပြည်တွင်းမှာ ဘီအမ်ဒဗလျူ အိုင်စီးရီးတွေနဲ့ အိတ်ခ်ျစီးရီးတွေဆို တော်တော်များများ သိကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာတော့ ဘီအမ်ဒဗလျူ ရှိုးရွန်စင်တာကို ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီ တစ်ခုနဲ့ ပါတနာရှစ်ပူးပေါင်းပြီး ရန်ကုန်မြို့ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ နာနတ်တောလမ်းနဲ့ ပြည်လမ်းထောင့်မှာ မကြာသေးခင်က ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီအမ်ဒဗလျူကား ကုမ္ပဏီဟာ ဆိုလို့ရှိရင် ကားအမျိုးအစားစုံအောင် ထုတ်လုပ်နေတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုးပွင်း နှစ်ယောက်စီးကားတွေ အပြင် ဆီဒန်၊ စပေါ့ ၀ဂ်ဂွန်၊ စပေါ့ရိုးရိုး၊ နဲ့ ရိုစတာကားတွေ၊ ကို ထုတ်လုပ်လျက်ရှိတဲ့ကားကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီအမ်ဒဗလျူ အိုင်စီရီးကားတွေကိုတော့ ကားအသေးစားတွေ အနေနဲ့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဆီဒန်ကားတွေထဲမှာ ဆိုရင်တော့ ဘီအမ်ဒဗလျူ ၅ စီးရီး၊ ၃ စီးရီး၊ ၇ စီးရီး၊ အမ် မော်ဒယ်တွေကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ရိုစတာတွေကိုတော့ ဇစ်ဖိုး နာမည်နဲ့တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး အမိုးဖွင့် နိုင်တဲ့ နှစ်ယောက်စီး ကားအမျိုးအစားတွေကိုတော့ ဘီအမ်ဒဗလျူ ၂ စီးရီး၊ ၄ စီးရီး၊ ၆ စီးရီး၊ အမ်မော်ဒယ်တို့ တွေမှာ တွေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ တွေ့မဲ့ စီးရီးတွေ အနေနဲ့ ဘီအမ်ဒဗလျူ အိုင်စီးရီး၊ ဘီအမ်ဒဗလျူ အိတ်ခ်ျ ဖိုက်၊ ဘီအမ်ဒဗလျူ အိတ်ခ်ျ ၀မ်း၊ ဘီအမ်ဒဗလျူ ဖိုက်စီးရီး၊ ဘီအမ်ဒဗလျူအိတ်ခ်ျ စစ်၊ စတဲ့ကားတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီအမ်ဒဗလျူဟာဆိုရင်တော့ ဥရောပကား ဘရန်တွေထဲမှာ ပြည်တွင်း လူကြိုက်များတဲ့ ဘရန်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်းချမှုဟာ သူအချိုးအစားနဲ့သူ အထိုက်အလျာက်ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘီအမ်ဒဗလျူကားတွေဟာ နာမည်ကြီးတဲ့ အတိုင်း စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဂျာမန်ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မောင်းနှင်ခြင်း အတွက် အကူ မောင်းနှင်မှု တွေအပြင် လုံခြုံရေး အတွက် လည်းနည်းပညာတွေကို အဓိက စီမံထားရှိထားပါတယ်။ လမ်းကျဉ်းတွေ မောင်းနှင်တဲ့နေရာမှာလည်းအကူစနစ်တွေ ပါဝင်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချစွာ မောင်းနှင်မှုကို ပေးပါတယ်။ မမြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေအတွက်လည်း အကူစနစ်တွေ ပါဝင်ပြီး ပြီးပြည့်စုံမှုကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ ထိပ်ပိုင်းမီးတွေကို စပေါ့လိုက်ခ်မီးတွေပေးထားပြီး ညကြည့်ဗားရှင်းတွေကို ပါပေးထားပါတယ်။ အော်ဒီ ကားတွေက တော့ခ်ျပေတွေနဲ့ သွားနေချိန်မှာ မားစီးဒီးကတော့ လေပေါ် တယ်လီ မတ်တရက်စ် စနစ်တွေနဲ့သွားပြီး ဘီအမ်ဒဗလျူကတော့ နက်ဝပ် ဆိုင်းငံမှု ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။ တတိယမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ဘီအမ်ဒဗလျူ အိတ်ခ်ျ ဖိုက်စီးရီးတွေမှာ စတီယာရင်တွေကို ပိုမို ပေါ့ပါးအောင်လုပ်ထားပြီး လောင်စာဆီက ပိုပြီး သက်သာလာခဲ့ပါတယ်။ ဘီအမ်ဒဗလျူ အ်ိတ်ခ်ျ ဖိုက်တွေကို မြင့်မားတဲ့ နည်းပညာ စနစ်တွေ နဲ့ ဖွဲ့စည်ထားတဲ့ အပြင် ကျယ်ဝန်းတဲ့ အနောက်ဖက် နေရာတွေနဲ့ ပြည့်စုံကာ ဈေးကွက်အတွင်း အကောင်းမွန်ဆုံးကားတစ်စီး အဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်. ကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်မှု အကူ စနစ်တွေ ပါဝင်တဲ့ အပြင် ကားအတွင်းဖက် အလယ်မှာ ရှိတဲ့ LCD ဒစ်ပလေးတွေကလည်း ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ ထိုစနစ်တွေကိုတော့ ဘီအမ်ဒဗလျုရဲ့ ၂၀၁၅ အိတ်ခ်ျ ဖိုက်မော်ဒယ်တွေမှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘီအမ်ဒဗလျူ အိတ်ခ်ျ6စီးရီးကားတွေဟာဆိုရင် အင်ဂျင်ပါဝါ ၃၀၀၀ စီစီရှိပြီး အင်လိုင်6းကိုသုံးထားပြီး မြင်းကောင်ရေ ၃၀၀ နီးပါးရှိပါတယ်။ အတွင်းဖက်မှာဆိုရင် ခရီးသည်ခုံနဲ့ ဒရိုင်ဘာခုံတွေကို မြင့်မားစွာ ပြုလုပ်ထားပြီး လယ်သာ ခုံတွေဖြစ်ကာ ရှေ့နောက်ချိန်ညိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝါ မှန်များ၊ မှန်လေးဖက်လုံးကို အဖွင့် အပိတ်လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းပညာတွေကိုပါ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ လောင်စာဆီအတွက် လျော့နည်းနေပါက အချက်ပေးတဲ့ စနစ်တွေ ပါဝင်ပြီး လယ်သာ စတီယာရင် တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အော်ဒီယို စနစ်ပါရှိတဲ့ မှတ်ညဏ် စနစ်တွေ ပါရှိပြီး ဒရိုင်ဘာ နှစ်ယောက်အတွက် မှတ်ညဏ် စနစ်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ စပီကာ ၁၀ ခုပါဝင်ပြီး ဆပ်ဝူးဖာ ၂ လုံး၊ ရေဒီယို ဒေတာ စနစ်နဲ့ ၂၀၅ ၀ပ်ရှိတဲ့ စတူဒီယို အော်ပို့တွေလည်း ပါရှိပါတယ်။ မိုးရွာရင် အလိုလို လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ၀ိုင်ဘားစနစ်တွေနဲ့ အနောက်ဖက်မှာပါရှိတဲ့ ၀ိုင်ဘားတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အမိုးဖက် ဆန်းရု့တွေလည်း ပါဝင်ပြီး ပါဝါ မှန်ဖြစ်တဲ့ ဆန်းရု့တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အလွိုင်းဝှီးတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး လုံခြုံရေး စနစ်များ အနေနဲ့ လေးဘီးလုံးမှာ အော်တို ဘရိတ်စနစ်၊ သူခိုး သတိပေးစနစ်များ၊ ဘေးဖက်ကော်နာ မီးများ၊ အရှေ့နဲ့အနောက် လေအိတ်များ၊ လျှပ်စစ် ဘရိတ်များ၊ တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်မှု ၊အရေးပေါ် ဘ၇ိတ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု၊ ဘလူတုမ့်များ စတဲ့ စနစ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ပြည်တွင်း ရေပန်းစားတဲ့ မော်ဒယ်များ
ပြည်တွင်းမှာ ရှိတဲ့ ဘီအမ်ဒဗလျူ ရိူးရွန်တွင် ဘီအမ်ဒဗလျူ အိုင်စီးရီး၊ ဘီအမ်ဒဗလျူ အိတ်ခ်ျ ဖိုက်၊ ဘီအမ်ဒဗလျူ အိတ်ခ်ျ ၀မ်း၊ ဘီအမ်ဒဗလျူ ဖိုက်စီးရီး၊ ဘီအမ်ဒဗလျူအိတ်ခ်ျ စစ်၊ စတဲ့ကားတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီအမ်ဒဗလျူ အိုင်စီးရီးနဲ့ ဖိုက်စီးရီး၊ စစ် စီးရီးတွေဟာ ပြည်တွင်းမှာ အတွေ့ရအများဆုံး မော်ဒယ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းရဲ့ နောက်မှာတော့ ဘီအမ်ဒဗလျူ အိတ်ခ်ျ စစ် စီးရီးတွေကိုပါ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီအမ်ဒဗလျူ အိတ်ခ်ျ စစ် စီးရီးတွေကတော့ ၂၀၁၀ကို ဈေးနှုန်း ၁၃၀၀ သိန်းရှိပြီး လေအိတ် ၁၂ လုံး ပါဝင်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ ရရှိနိုင်တဲ့ ဘီအမ်ဒဗလျူ ဘရန်များ
ပြည်တွင်းက ဘီအမ်ဒဗလျူ ရှိုးရွန်မှာတော့ ဘီအမ်ဒဗလျူရဲ့ဆလွန် စီးရီးတွေ ဖြစ်တဲ့ ၃စီးရီး၊ ၅စီးရီး၊ ၆စီးရီး၊ ၇ စီးရီးကားတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး အက်စ်ယူဗီ ကားတွေထဲမှာတော့ အိတ်ခ်ျ ၀မ်း စီးရီး၊ အ်ိတ်ခ်ျ သရီး စီးရီး၊ အ်ိတ်ခ်ျ ဖိုးစီးရီးနဲ့ အ်ိတ်ခ်ျ ဖိုက် စီးရီးတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့်ကတော့ ဒေါ်လာ ၇သောင်းကနေ ဒေါ်လာ ၅သိန်း ၅သောင်းထိ အစားစားရှိတယ်လို့လည်း သိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီကနေ ကားဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်း ၀န်ဆောင်မှုများ အနေနဲ့ သုံးနှစ် အခမဲ့ ပြင်ဆင်မှုနဲ့ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ ၀ရန်တီတွေကိုပါ ရရှိမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကိုယ်ထည်နဲ့ အင်ဂျင်ရဲ့ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းမှုတွေပါ ပါဝင်ပါတယ်။
ဘရန်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းအရာ
ဘီအမ်ဒဗလျူမှာ အခွဲဘရန်တစ်ခု အနေနဲ့ ဘီအမ်ဒဗလျူ အိုင်ဘရန်ကို တွေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ထိုဘရန်ဟာဆိုရင် ၂၀၁၁ ကနေ စတင်ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်ပြီး ပလပ်အင် လျှပ်စစ် ယာဉ်တွေကို ထုတ်လုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီအမ်ဒဗလျူ အိုင် သရီးဆိုရင် ပုံစံဒီဇိုင်း ဆန်းသစ်တဲ့ မြို့တွင်းမောင်း တံခါး (၅) ပေါက်ဖြစ်ပြီး ဘီအမ်ဒဗလျူရဲ့ အိုင်ပရောဂျက်ထဲက တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၃ ကနေစထုတ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် ၆၄၇ စီစီဖြစ်ပြီး ဆလင်ဒါ နှစ်လုံးပါရှိတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိပ်ဆုံး BMW မော်ဒယ်